Moon oo ka deyriyay xaaladda Suuriya - BBC Somali - Warar
Moon oo ka deyriyay xaaladda Suuriya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 December, 2012, 02:34 GMT 05:34 SGA
Qaramada Midoobay waxa ay ku qiyaastay in 40 kun ay ku dhinteen dagaalka Suuriya
Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa sheegay in dagaalka Suuriya uu gaaray heer cusub oo naxariis aan lahayn.
Mr Ban waxa uu hadlay iyadoo ciidanka dowladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradku ay ku dagaallameen gudaha iyo banaanka magaalada Dimishiq, kaasi oo si xun u saameeyay duulimaadyadii tagi lahaa magaalada.
Isaga oo la hadlayay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Mr Ban waxa uu sheegay in dadka rayidka ah maalin walba la xasuuqo, isla markaana dagaalka hadda lagu qiyaasay inay ku dhinteen ilaa afartan kun oo qof, iyadoo tiro badan oo qaxooti ahna uu sababay.
Waxa uu saadaaliyay in qaxootigu gaari karo toddobo boqol kun sanadka soo socda horraantiisa.
Dalka Suuriya gudihiisa internetka iyo telefoonada ayaa go'an maalintii saddexaad.